Bononoka - Wikipedia
Ny bononoka dia sakafo azo avy amin'ny fandomana Mangahazo, ka ahazoana mangahazo mahasalama kokoa sy matsiro kokoa. Misy fofona somary mahery izy ka lasa tsy itiavan'ny olona sasany azy. Ny mangahazo vita bononoka dia azo amainina sy totoina ka anaovana karazana mofo mangahazo antsoina hoe ketapotsy.
1 Faritra mpanao bononoka
2 Fomba fanamboarana bononoka
3 Ny fihotrehana (Mavingy)
4 Ny fialan'ny akora manapoizina
5 Ny tsirony sy fofony
Faritra mpanao bononokaHanova
Vakinankaratra izany hoe anelanelan'Ambatolampy - Faratsiho - Antsirabe
Fomba fanamboarana bononokaHanova
Misy fiovana kely arakaraka ny faritra, fa amin'ny ankapobeny dia toy izao :
Mihady na mividy mangahazo
Voasana sy sasàna hadio tsara
atao anaty gony na harona ary fatorana tsara, fonosina mololo raha tiana hisy ilay "taviny mavomavo".
alona anaty rano (tatatra na tanimbary) mandritra ny 2 herinandro
andrahoina tahaka ny batabata
Ny fihotrehana (Mavingy)Hanova
Mandritra ilay fotoana ilomany anaty rano dia misy mikiraoba mihinana ilay mangahazo. Zavatra mandeha amin'izao fotsiny izy io, tsy novolena ny mikraoba, hany ka izay mikraoba misy eo sy izay akora amin'ny mangahazo no mitondra azy. Noho izany, satria amin'ny toerana tsy misy rivotra (anaerobie) ao anaty filoman-drano ao, dia misy karazana fermentation maromaro mitranga, indrindra ireo ny "fermentation lactique[ Wikibolana? ]" (fanao @ habobo sy choucroute) sy ny "fermentation alcoolique[ Wikibolana? ]" (ohatra ny mofomamy sy mofo dipaina).
Voalohany aloha, tapahan'ireo mikiraoba ny tavolo anaty mangahazo hahazoany glucose, ary haniny ilay glucose mba hamoahany enton'arina (CO2) sy hafanana ary asidra laktika (fermentation lactique) na alikaola (fermentation alcoolique).
Ny fidinan'ny pH noho ny asidra laktika sy ny famokarana alikaola dia misakana ny mikraoba hafa tsy hitombo ao intsony, indrindra fa ireo mikraoba mety mahasimba azy na ireo mikraoba mankarary.
fomba itahirizana ny mangahazo tsaratsara kokoa ny bononoka
tsy atahorana hankarary noho ny mikraoba ny bononoka
Mbola misy karazana mavingy hafa koa mitranga fa tsy dia tena lehibe, kanefa mandray anjara ihany koa amin'ny tsiro sy fofon'ny bononoka.
Ny fialan'ny akora manapoizinaHanova
Noho izy milon-drano dia mivoaka entin'ny rano ny asidra cyanhydrique ao anatin'ny mangahazo. Fa ny fanapotehan'ireo mikraoba ny karazana glucosides koa dia manampy amin'ny fanalana ireo poizina izay miraikitra ka tsy miala amin'izao.
Ny tsirony sy fofonyHanova
Ny bononoka dia malemy, mipasaka sy matsiro. Misy fofona mampiavaka azy koa, izay tsara ho an'ny sasany fa ratsy ho an'ny sasany. Ny mahatonga ireo tsiro sy fofona ireo dia :
ireo asidra sy alikaola vokatry ny fermentation
ny enton'arina avy amin'ny fermentation dia mampipasaka azy rehefa andrahoina satria mitombo hadiry haingana amin'ny hafanana
ny fahatapatapahan'ireo molecules ngeza toy ny tavolo na mafy toy ny pectine dia mampalemy azy sy mampaha-re kokoa ny tsirony
ny soufre[ Wikibolana? ] mivoaka noho ny fihinanan'ny mikraoba ny ampahany amin'ny proteines amin'ilay mangahazo mahatonga fofona. Raha kely io dia manitra (ohatra ny atody masaka amin'ny akorany, raha be loatra dia maimbo (ohatra ny tatatra).
Raha te-hihinana mangahazo tsara sy matsiro ary ara-pahasalamana dia ny bononoka no tsara indrindra, satria sady afaka ny toxique no voaaro amin'ny mikiraoba ratsy izy, ary mihatsara izy ao am-bava. Tsy misy toxique[ Wikibolana? ] velively ny zavatra mahatonga ny fofony sy ny tsirony mampiavaka azy iny fa azo antoka tsara.
Tsy isika malagasy irery - araka ny filazan'ny sasany - no manao bononoka, fa misy firenena afrikana hafa koa, saingy hafa no anarana fiantsony azy, ary tsy tena mitovy tanteraka ny fikarakarana azy. Amin'ny teny frantsay dia "rouissage" no iantsoana an'io fomba fandomana mangahazo io (cf google).
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Bononoka&oldid=1045482"
Dernière modification le 28 Mey 2022, à 12:19
Voaova farany tamin'ny 28 Mey 2022 amin'ny 12:19 ity pejy ity.